Gresy: Fanakianana Ireo Mpanao Politika Nandritra Ny Fankalazàna Ny Theophany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2012 3:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, Ελληνικά, Svenska, Deutsch, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray momba an'i Eraopa anaty Fahasahirànana.
Tao Gresy, ny 6 Janoary dia androm-pirenena fankalazàna ny Theophany, fantatra hatry ny ela amin'ny hoe Phota (“hazavàna”). Ireo fomba amam-panao ireo dia mihodina manodidina ny Fitahiana Lehibe Avy Amin'ny Rano : atsipy any anaty rano ny hazofijaliana iray ary miezaka ny hàka azy io ny olona mba handraisana vintana tsara sy fitahiana. Isan-taona, ny governemanta sy ireo mpiasam-bahoaka dia mandray anjara amin'ilay fankalazàna, ka aorian'izany no ananan'izy ireo fotoana hanaovana fanambaràna amin'ny fomba ofisialy momba ny maha-zava-dehibe ara-pinoana an'io andro io, laroina fanehoan-kevitra ara-politika sy ara-tsosialy.
Kanefa, noho ny fahasahirànana ara-toekarena, politika ary sosialy lalovan'i Gresy, ny fankalazàna tamin'ity taona ity dia voamariky ny fanehoan-kevitra mivaivay avy amin'ny vahoaka amin'ny tsy hafaliany sy ny fanakianany an'ireo mpanao politika. Tsy dia nahagaga loatra ny nisian'izany, satria tahaka izay efa niseho rahateo tany aloha nandritra ny androm-pirenena fankalazàna ny “Ochi” tamin'ny 28 Oktobra, rehefa voatery niàla ny Filoha Karolos Papoulias taorian'ny nilazan'ireo mpanao hetsi-panoherana azy ho mpamadika.
Nitranga indray izany tamin'ity indray mandeha ity, rehefa niseho tao Chalkida ny Filoha Papoulias, raha tokony ho tany Piraeus, seranana lehibe ao amin'ny firenena, no nalehany araka ny fomba fanao. Nohorakorahan'ny vahoaka izy, niantso azy ho mpamadika sy niventy teny faneva manohitra ny fanenjanana ny fitantànana, araka izay asehon'ity lahatsary [el] manaraka ity :
Faharoan'izay, nokianin'ny vahoaka ihany koa ny hoe ny Praiministry ny governemantan'ny marimaritra iraisana, Loukas Papadimos, dia tsy nanam-potoana nanatrehana fotoam-pankalazàna na iray aza, noho ny fandaharam-potoanany feno be. Lahatsoratra iray ao amin'ny apospasma.gr no miteny hoe :
Vao haingana, tao Athens, ny Minisitry ny ny Fanabeazana, Anna Diamantopoulou, dia nohorakorana nandritra ny fankalazana tao Dexameni any Kolonaki. Ao anatin’ity lahatsary ity [el], re ireo olona mihiaka hoe “Mahalevona tsara!” ( matetika ampiasain'ny Grika aorian'ny teny hoe “Mazotoa homana”) ary hoe “Ento miverina ny volan'ireo Orinasa afak'haba”:
Ianareo rehetra izay manakiana ny mpanao politika ( ary mety ny ataonareo), Eraopa sy ny sisa, meteza hanontany tena indray mandeha monja : nandritra ny 30 taona nisian'ny Metapolitefsi [vanim-potoana teo amin'ny tantaran'ny Grika taorian'ny nianjeran'ny fitondrana miaramika tamin'ny 1974], inona no mba natao”-ko” ho an'ny fireneko mba tsy hahatongavana amin'izao toerana izao androany? Heveriko fa misafoaka ianareo satria very daholo ny fiadananareo. “indignado” iray…anatin'ny maro hafa
Ny hajiantsary sy ny sary rehetra nasongadina dia maneho ny Andro fialantsasatra Kristiana noho ny Epiphany, Thessaloniki. Sary avy amin'i Konstantinos Tsakalidis, fizakà-manana Demotix (06/01/2011).